Izindaba - Ucwaningo luthola ukuthi ubhadane lweCovid-19 lunezinguquko ezisheshayo ezimweni zengqondo nasekuthengeni omatilasi
UMkhandlu Wokulala Ongcono uvame ukwenza ucwaningo olwahlukahlukene lwabathengi ukusiza abakhiqizi bamatilasi kanye nemboni ebanzi yokulala ukuze baphendule kangcono izidingo zabathengi, balindele izitayela ezizayo kanye nemizamo yokukhangisa. Esitolimeni sakamuva socwaningo olunzulu, i-BSC ihlola ukuthi ubhadane lweCovid-19 luguqule futhi lwasheshisa kanjani isimo sengqondo sabathengi kanye nokuziphatha kwabo okuhlobene nokuthenga ubuthongo, ezempilo kanye nomatilasi. Ucwaningo olwenziwe ngo-2020, luyingxenye yochungechunge oluqala ngonyaka we-1996 oluvumela imboni ukuthi ilandelele izinguquko nezitayela ngokuhamba kwesikhathi. Engxenyeni yesibili ka-2020, i-BSC yenze ucwaningo lwesibili olugxile ekutheni abathengi bakusebenzisa kanjani ukubuyekezwa oku-inthanethi ukucwaninga omatilasi nokwenza izinqumo zokuthenga. Ngokubambisana, imiphumela yalokhu kuhlola inikezela ngemininingwane ebalulekile abakhiqizi abangayisebenzisa ukwenza ngcono ukusebenza kwabo futhi basebenzele abathengi kangcono. Qhubeka ufunde.
Ucwaningo olubanzi lwabathengi olwenziwe nguMkhandlu Wokulala Ongcono luthola ukwesekwa okukhulayo kokuthengwa komatilasi online kanye nokwehla kwenzalo yabathengi ekusebenziseni ukuvakashelwa ezitolo njengomthombo oyinhloko wolwazi kubathengi bamatilasi.
Ucwaningo lwe-BSC lubhala ushintsho olukhulu emakethe yezitolo yomatilasi eguqukayo.
Ucwaningo luthole izindaba ezimnandi kubathengisi bamatilasi abaku-inthanethi neziteshi. Ucwaningo luthole ukuthi izintandokazi zabathengi ngokuthengwa komatilasi online seziya ngokunyuka, ikakhulukazi kubathengi abasebasha. Futhi labo bathengi abancane mancane amathuba kunabathengi abadala ukuthi bathi kubaluleke kakhulu ukuzizwa nokuzama umatilasi ngaphambi kokuthenga.
Ngenkathi ucwaningo luthola ukuthi izitolo zezitini nodaka zihlala ziyingxenye ebalulekile yomatilasi abathengisa, kwaveza nokuthi bambalwa abathengi ababheka ukuvakashelwa ezitolo njengomthombo odingekayo wolwazi wokuthenga omatilasi.
Futhi yaphawula ushintsho olukhulu emibonweni yabathengi ngokulala njengoba ubhadane lweCovid-19 lwenza umthelela walo wazwakala ezweni lonke. Mhlawumbe befuna ukuthola induduzo eyengeziwe ezindlini zabo zokulala, abathengi abahlala emakhaya babenamathuba aphindwe kabili kunamanye abathengi bokukhetha omatilasi abathambile kakhulu.
"Lolu cwaningo loMkhandlu Wokulala Ongcono luqinisekisa ukunethezeka okukhulayo kwabathengi ngokuthenga omatilasi ku-inthanethi, umkhuba ohambisana nokushintshwa kwabathengi okuhambisanayo ekucabangeni ucwaningo olwengeziwe lwe-inthanethi ngokuvakasha ezitolo njengengxenye yenqubo yabo yokufuna imininingwane," kusho uMary Helen Rogers , usekela mongameli wezokukhangisa nokuxhumana we-International Sleep Products Association. (I-BSC ingumbutho wezemfundo wabathengi we-ISPA.) “Ibuye inikeze ukuqonda okwenzekayo kwabathengi emhlabeni weCovid-19 imboni eyaqala ukubhekana nawo ngonyaka odlule, okuzoqhubeka kulo nyaka.
"Kukonke, ucwaningo luveza inqwaba yokuqonda abakhiqizi nabathengisi abangayisebenzisa ukuxhumana kangcono namakhasimende abo," kusho uRogers. "Ibuye inikeze ngemininingwane yokulandelela esebenza njengekhadi lesikhwama ekusebenzeni kwemboni kumjikelezo wokufakwa esikhundleni komatilasi, okuyimbangela yokuthengwa kukamatilasi."
Ukulandela izitayela zomugqa
Ucwaningo akuyona into entsha eyenziwe yi-BSC, eye yenze ucwaningo lwabathengi njalo kusukela ngo-1996 ukuqonda nokulandela izinguquko ezimweni zabathengi ezindabeni ezibalulekile maqondana nokuthengwa kokulala nokulala kumatilasi. Ucwaningo olukhulu lokugcina lwabathengi lwenziwa ngo-2016.
"Inhloso enkulu yalolu cwaningo lweBSC ukulandelela izitayela zokuthi kungani abathengi bethenga umatilasi ukuze bazise kangcono isu lokuxhumana lemboni," kusho uRogers. “Sifuna ukunika imboni ukuqonda kangcono ukuthi yini edala abathengi ukuthi baqale lolu hlelo, yini abayazisa kakhulu nokuthi balindeleni. Sifuna ukusiza imboni ukuthi iphumelele kakhulu ohambweni lomthengi futhi sikulungele kangcono ukuqondisa nokufundisa umthengi. ”
Imikhuba yokuthenga nezinto ozithandayo
Ucwaningo lwango-2020 luthole ukuthi okulindelwe ngabathengi ngamanani omatilasi kanye nemijikelezo yokubuyiselwa kukamatilasi kuqhathaniswa nalokho okutholwe ngo-2016, okuhlinzeka ngesilinganiso sokuzinza kwemboni ebone izinguquko ezinkulu eminyakeni yamuva. Ucwaningo luphinde lwembule ukuthi ukwaneliseka kwabathengi ngomatilasi babo kwehle kancane kusukela ngo-2016, okuthole ukuthi iBSC izobheka ukuthi ngabe kunentuthuko enkulu yini.
Izinguquko ezinkulu kakhulu kusukela ngo-2016 zihlobene nesipiliyoni sokuthenga, ziveza ukukhetha okukhulayo kokuthengwa komatilasi abaku-inthanethi futhi kungagxili kakhulu ekuvakasheni ezitolo njengomthombo wolwazi kumatilasi.
Olunye ushintsho, empeleni, kwaba ukuvela kwalolu bhubhane, “olubonakala lube nomthelela ekuthandeni kwabantu ukulala namatilasi,” kusho uRogers.
Abathengi abangaphansi kwama-oda wokuhlala emakhaya ngesikhathi kwenziwa inhlolovo kulo Agasti odlule babenamathuba amaningi okuthi abanye bathi bathola ukulala ngokwanele futhi bathi ukuthuthukiswa kwekhaya nezindlela zokuphila kuzoba yimbangela yokushintshwa kukamatilasi.
Ucwaningo lwe-BSC luthole izimbangela eziyisihlanu eziyinhloko zokushintshwa kukamatilasi, okuyisici esibalulekile esilandelwa abakhiqizi bezingubo nabathengisi. Ukwehla komatilasi, okushiwo ngabangu-65% kwabaphendulile, nempilo nokunethezeka, okushiwo ngabangu-63% kwabaphendulile, yizimbangela ezimbili ezivame kakhulu zokushintshwa kukamatilasi. Ukuthuthukiswa komatilasi, okubandakanya isifiso sabathengi sokukhuphukela kumatilasi amakhulu, kwalandelwa, kwabalulwa ngabaphenduli abangu-30%. Ukwenziwa ngcono kwekhaya kanye nezinguquko kwendlela yokuphila kubalulwe njengezimbangela zokuthengwa ngabaphenduli abangama-27%, kuyilapho ama-26% athe omatilasi babo abafinyelela eminyakeni ethile yimbangela yokuthenga.
Ngenkathi ucwaningo lwakamuva lukhomba izinguquko eziningi ezimeni zabathengi maqondana nokuthenga omatilasi, kutholakale ukuthi izinkomba zokulandela ngomkhondo zihlale zizinzile kusukela ngo-2016.
Isibonelo, ocwaningweni lwango-2020, abathengi bathe amanani abo abonwayo kamatilasi wekhwalithi abeyizinga lama- $ 1,061. Lokho kuncane kakhulu kunencazelo yabathengi abangu- $ 1,110 ababikwe ngo-2016, kodwa kuphakeme kakhulu kunencazelo yabathengi abangama- $ 929 ababikwe ngo-2007.
Ucwaningo lwango-2020 luthole ukuthi abathengi bagcina omatilasi babo bangaphambilini cishe isikhathi esifanayo nango-2016. I-2020 isho ukuthi yiminyaka eyi-9, icishe ifane nencazelo yango-2016, eyayiyiminyaka engu-8.9. Kepha isikhathi esesiphansi manje sesiphansi kakhulu kunango-2007, lapho isilinganiso sasiyiminyaka eyi-10.3.
Abathengi balindele ukugcina umatilasi omusha isikhathi esingakanani? Isilinganiso esilindelekile sango-2020 sasiyiminyaka eyi-9.5, uma kuqhathaniswa nencazelo elindelwe yango-2016 yeminyaka engu-9.4. Isilinganiso sika-2007 esilindelekile sasiphezulu kakhulu eminyakeni eyi-10.9.
Ucwaningo olwenziwe online yiFluent Research, bekuyisampula kazwelonke yabathengi ababalelwa ku-1 000, bonke abantu abadala base-US abaneminyaka engu-18 noma ngaphezulu ababamba iqhaza ezinqumweni zokuthenga omatilasi.
Abaphenduli bebemayelana ngokuhlukana ngokulingana emigqeni yezobulili, kuthi abesilisa babe ngama-49% nabesilisa kube ngama-51%. Bakhombise iminyaka ehlukahlukene, ngama-26% eqenjini labaneminyaka eyi-18-35, ama-39% eqenjini leminyaka engama-36-55 (ngokwesiko elibhekwa njengeqembu labantu ababhekiswe embonini) kanye nama-35% aneminyaka engama-56 noma ngaphezulu. Amaphesenti angama-75 abaphendulile bekungabamhlophe, ama-14% bekungamaSpanishi kuthi ama-12% kube ngabamnyama.
Abaphenduli bocwaningo baphinde bamele izifunda ezine ezinkulu zezwe, lapho i-18% ihlala eNyakatho-mpumalanga, i-22% ihlala eNingizimu, i-37% ihlala eMidwest futhi i-23% ihlala eNtshonalanga. Amaphesenti angamashumi amathathu nambili ahlala ezindaweni ezisemadolobheni, ama-49% ahlala ezindaweni ezingaphansi kwedolobha, kuthi ama-19% ahlala ezindaweni zasemakhaya.
Bonke abaphendulile bathe babambe iqhaza ekucwaningeni omatilasi nasekuthengeni izinqumo, kwathi abangu-56% abaphendulile bathi banesibopho kuphela, abangu-18% bathi banesibopho ikakhulu, kanti abangu-26% bathi babambe iqhaza ocwaningweni futhi ukuthenga izinqubo zokwenza izinqumo.
Abaphenduli baphinde bakhombise uhla olubanzi lwemali engenayo yasekhaya, kanti ama-24% anemali engenayo engaphansi kwama- $ 30,000, i-18% inemali engenayo yasendlini engama- $ 30,000- $ 49,999, i-34% inemali engenayo yasekhaya engu- $ 50,000- $ 99,999, kanti i-24% ihola imali engama- $ 100,000 noma ngaphezulu.
Amaphesenti angamashumi ayisihlanu nanhlanu abaphendulile aqashiwe, kuyilapho ama-45% ebengaqashiwe, okuyisibalo esingaveza amanani aphezulu okungaqashwa kwabantu abonwe ngesikhathi kubhebhetheka, ngokusho kweBSC.
Indwangu yetafula le-PEVA, Umgijimi wetafula, Isethi yokulala ye-Microfiber, Ubisi Flannel Duvet Cover, ithawula lasekhishini, Isethi yokulala yoboya bamaCoral,